Accueil > Gazetin'ny nosy > Anjerimanontolo Miantso ny vahoaka sy ny tafika ny Seces hanavotra tanindrazana
Anjerimanontolo Miantso ny vahoaka sy ny tafika ny Seces hanavotra tanindrazana
Miantso ny vahoaka sy ny tafika
ny Seces hanavotra tanindrazana
Namoaka fanambarana omaly ny Sendika Seces. Mba tsy hiovan’ny vontoatiny,
dia indro avoakanay manontolo izany.
Ny SECES na “Sendikan’ny Mpampianatra-Mpikaroka sy Mpikaroka-Mpampianatra”, Sampana Antananarivo, manoloana ny toe-draharaha tsy roa aman-tany niseho teto amin’ny firenena dia manao izao fanambarana izao :
Hita tamin’ireo karazana haino aman-jery samihafa fa tototra ny fahalovana, ny kolikoly ary ny fanamparam-pahefana mivantana ny fandaniana amboletra ny lalàna hifehy ny fifidianana tao amin’ny Antenimierampirenena ny talata lasa teo. Porofo izany, fa efa manomboka sahady ny tsy filaminana (ara-pôlitika sy ara-tsaina) mialoha ny fifidianana eto Madagasikara. Ahiana hopotehin’ireo olom-bitsy ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy.
Amin’ny maha Vato nasondrotra ny tany ny SECES dia miantso an’ireo sisa manam-panahy izahay, manainga ihany koa ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo ary indrindra ny tafika mba samy handray ny andraikitra manandrify azy avy ka hiambina ny tanindrazana iombonana tsy hoviravirain’ireo olom-bitsy fahavalom-pirenena. Tompon’andraikitra tsy afa-miala amin’izao tantara matroka eto amin’ny firenena izao ireo mpitondra fanjakana tsy an-kanavaka, koa tsy misy tokony avela ho afa-mitsoaka any ivelany na iray aza, ary na inona na inona antony, rehefa tonga tokoa ny tokoa fa tsy maintsy miara-miatrika ny zava-misy eto an-toerana mandritra ny ho fanarenam-pirenena.
Raisinay SECES Sampana Antananarivo ho adidy ny mampiomana sahady ny besinimaro mba ho samy hahay hisintona lesona manoloana ny ronono an-tavo sy ny fampanantenana poaka aty fanaon’ireo mpisehatra pôlitika rehefa hanangoly vahoaka hahazoana fahefam-pitondrana amin’ny alalan’ny fifidianana.
Manantitrantitra hatrany ny SECES fa tsy misy vahaolana mahomby, na ho an’ireo mpifanandrina ara-pôlitika izany, na ho an’ireo mpitondra sy entina, na ho an’ireo samy mpandraharaha eto Madagasikara, eny fa hatrany amin’ireo samy vahoaka tsy mandady harona, afa-tsy ny firosoana amina Fikaonan-doham-paritra ary faranana amina Fikaonan-doham-pirenena mba hametrahana vahaolana matipaika, mahomby ary eken’ny rehetra manoloana ireo olana maro lafy (ara-pôlitika, ara-tsosialy, ara-kolontsaina, ara-toekarena, ara-pinoana, ara-pifandraisana amin’ny any ivelany,…sns) mianjady eto amin’ny tany sy ny firenena. Satria tsy voaozona ny hahantra ny vahoaka Malagasy no sady tsy lany olon-kendry sy manam-panahy ka afaka manome tan-tsoroka ho fanatanterahana an’ireo. Ny ho tombontsoany no mampihazakazaka ireo vahiny sy ny firenen-kafa eto amintsika, koa tsy maintsy isika Malagasy ihany no miezaka mamoaka vahaolana “vokatry ny tany” izay vao hiarin-doha ity firenena malalantsika ity. Vonona ny SECES Sampana Antananarivo ny amin’ny tan-tsoroka ara-kevitra sy teknika ho fanatanterahana izany raha ilaina.
Ny SECES Sampana Antananarivo dia mankasitraka ny fijoroana amin’ny fiarovana ny tombontsoam-pirenena nasehon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana tamin’ny tsy nanekeny ho ara-dalàna ny volavolan-dalàna momba ny ZES farany teo. Koa dia matoky ny fahendrena ananan’io andrim-panjakana io ny SECES manoloana ny ho fandraisany andraikitra tsy mifanipaka amn’ny ara-dalàna sy ny tombontsoan’ny vahoaka malagasy.
Ny SECES Sampana Antananarivo dia mankasitraka no sady manohana tanteraka ny ezaka ataon’ireo mpitantana ny Oniversiten’Ambohitsaina amin’ny fiarovana sy famefena ny tanin’ny Oniversiten’Antananarivo mba tsy hobodoin’ireo fahavalom-pirenena (toy ny Inspecteur des impôts, ny Médécin retraité, Commissaire retraité, Manamboninahitra ambony amin’ny Fiarovam-pirenena …sns), mpaka an-keriny ny tanin’ny Anjerimanontolo intsony.
Ny SECES Sampana Antananarivo dia mankahery sy miray fo tanteraka amin’ny Malagasy tsy an-kanavaka mba samy hisikim-ponitra hampanjaka ny fahamarinana, hitandro hatrany ny firaisan-kinam-pirenena ary hiasa ho fanoitra ny fampandrosoana.
Natao teto Antananarivo, faha 05 aprily 2018
Ny SECES-Sampana Antananarivo